E hiwere Jiangyin Iverson Decoration Material Co., Ltd. na 2005. Ọ bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -ejikọta mmepe, imepụta na azụmaahịa.
Companylọ ọrụ anyị kpuchitere mpaghara 16,000 square mita nwere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha.
Ngwaahịa bụ isi bụ: ihe mejupụtara plastik osisi (WPC), ihe mejupụtara plastik okwute (SPC), ala ụlọ mpempe akwụkwọ PVC na ngwa ndị yiri ya wdg.
Ala ụlọ PVC nwere agba dị iche iche, dị ka ọka okwute, ọka ala osisi, wdg. Osisi osisi ọ bụla na -agbaze agba, na mbipụta na ụdịdị na -ahazi iji mepụta ezigbo mkpụrụ osisi na ọdịdị ya. Ọ dabara maka ala dị iche iche, a na -ejikwa ya n'ime ụlọ nwere nnukwu okporo ụzọ, dị ka ime ụlọ, kichin, ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ, ụlọ ndị ọbịa ma ọ bụ ọnụ ụzọ na paseeji iji dọta bọọlụ. Enwere ike itinye ya na ihe, taịl nile, vinyl ma ọ bụ osisi, a ...
Ala PVC bụ ụdị ihe eji achọ mma nke eji eme ihe n'ọtụtụ mba n'ụwa niile taa. Ọ na-ewu ewu na ahịa Europe na America na ahịa Eshia-Pacific, ọ na-ewukwa ewu na China, atụmanya mmepe ya dịkwa obosara. N'elu ala nke PVC nwere akwa pụrụ iche nke edoziri nke ọma na-eyi akwa na-eguzogide, yana akwa na-eguzogide ọgwụ nwere ọgwụgwọ pụrụ iche na-ekwe nkwa oke mgbochi nke ala ...
Ala SPC bụ ngwaahịa nke teknụzụ na amamihe. Ọ na -enye ngwakọta nke akwa dị iche iche, elu mkpuchi, akwa ịdị ọcha transperent pvc na -eyi oyi akwa, ihe nkiri e biri ebi dị elu, isi SPC na ogbi ogbi. SPC na -anọchi anya 'ihe mejupụtara plastik nkume' ma ọ bụ 'ihe mejupụtara polymer nkume'. Karịsịa, limestone, nke bụ onyinye inorganic. Ọ na-ewe 50-70% nke ọdịnaya ụlọ. Ndị ọzọ bụ PVC na stabilizer. N'ezie oke nke onye njikwa mmepụta ụlọ ọrụ ọ bụla na -ekpebi oke nke na -eme nnukwu d ...
SPC Flooring Rigid Core Interlocking Pịa mkpọchi PVC Vinyl Flooring SPC pụtara ihe mejupụtara plastik plastik.With isi siri ike, ọ bụ ọgbọ ọhụrụ nke mkpuchi ala, gburugburu ebe obibi, kwụsiri ike ma dịgidere karịa LVT.SPC n'ala na-anabata PVC dị elu na ntụ ntụ okwute. mkpọchi mkpọchi, nke enwere ike ịwụnye ngwa ngwa n'ụdị ala dị iche iche dị ka nchara ma ọ bụ seramiiki ma ọ bụ ala dị ugbu a wdg.